On jan 6, 2020 400
Notanterahana ny sabotsy lasa teo, teny amin’ny Lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena, Mahamasina ny fiaraha-mivavaka ho fifampiarahabana nahatratra ny taona teo amin’ny mpino ao amin’ny fiangonana FM Foi. Nitarika izany ny Pasitera Benjamina, lehiben’ity antokom-pinoana ity eto Madagasikara. Nandritra ny toriteny natao, no nanamafisany tamin’ny mpanaradia azy, fa tokony hametraka feno, izay zavatra na asa ataony eo am-pelatanan’Andriamanitra hatrany ny zanak’olombelona. Ny antony, misy isaky ny voalohan’ny taona tahaka izao ny faminaniana vaovao, ho entina miatrika ny fiainana.
Nisy ny antso avo nataony tamin’ny mpino ao aminy, amin’ny mba tokony hifankatiavan’izy ireo. « Raha misy ny lonilony, fahasorenana, fankahalana, dia fotoana izao tokony hifamelan’ny tsirairay », hoy izy.
Marihina fa efa mivelatra amin’ny sehatra iraisam-pirenena ny FM FOI. Ahitana ity trano fivavahana ity ny any Alemana, Frantsa, Seychelles, Maorisy, sy La Réunion, ary Canada. Ny tao Frantsa manokana, ny sabotsy lasa teo no nisokatra ny fiangonana FM Foi.